स्वास्थ्य पेज » एओर्टा एन्युरिज्म : धमनी फुलेको वा यसको समस्या कसरी थाहा पाउने ? एओर्टा एन्युरिज्म : धमनी फुलेको वा यसको समस्या कसरी थाहा पाउने ? – स्वास्थ्य पेज
एओर्टिक एन्युरिज्मको उपचार त्यसको आकार गाम्भीर्य र धमनीको कुन हिस्सा त्यसबाट प्रभावित भएको छ, त्यसको आधारमा भिन्दाभिन्दै तरिकाले गर्ने गरिन्छ ।
प्रायःजसो एब्डामिनल सर्जरी या एन्डोभस्कुलर सर्जरीको मद्दतले यसको उपचार गर्ने गरिन्छ । सर्जरी गर्नुपूर्व चिकित्सकहरूले यसकोबारेमा परीक्षण गर्ने गर्छन् । ताकि बिरामीको सर्जरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यकिन होस् ।